XOG: UNDP oo weysan cid ay ku aaminto gaadiid loogu talagalay HirShabeelle | Keydmedia
XOG: UNDP oo weysan cid ay ku aaminto gaadiid loogu talagalay HirShabeelle
HirShabeelle ayaa ah maamulkii ugu dambeeyay ee la aas-aasay xilliga dowladdii Xasan Sheekh, laakiin waxaa la degay Saraakiisha ku sugan Jowhar musuq-maasuq.
JOWHAR, Soomaaliya – Warar hoose ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in gaadiid ay UNDP ugu talagashay maamulka HirShabeelle la weysanyahay cid lagu aamino, si loogu wareejiyo.
Gaadiidkaan oo tiro ahaan gaaraya ilaa 12 ayaa haatan yaalla xafiiska hay'adda ee Muqdisho, waxaana la sheegaya in ay jirto heer kalsooni la’aan ah uu xafiiska QM ka qabo HirShabeelle, sababo la xiriiro Musuq-maasuq.
Gaadiidkaan ayaa qeyb ka ah deeq loogu talagalay maamulada qaar, taas oo horey loo wada siiyay, haseyeeshee HirShabeelle ku guul dareysatay in ay la wareegto.
Maamulka HirShabeelle ayaa la sheegay in hada ka hor 7 Gaari oo nooca qooqanta loo yaqaanno lagu wareejiyay, balse dabagl dheer kadib la ogaaday in ay si shaqsi ah u isticmaaleen madaxda ugu sarreyso maamulka iyo wasiiro aan haatan maamulka tirsaneyn.
Deeq bixiyaasha ayaa arintaas ka xumaaday sida aan xogta ku helnay, waxaana la sheegayaa in ay haatan ka fekerayaan cida ay ku aaminayaan maareynta hantiadaan ma guurtada ah ee maamulka sida shaqsiga ah u isticmaalayo.
HirShabeele oo ah gobolka ugu kheyraadka badan Soomaaliya ayaa waxaa la haray musuq maasuq gaaray heer ah in banaanka laga ogaado, waxaana jirin hormar la taaban karo uu maamulka ka sameeyay, dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga.